Kolombia: Nolavin’ny fitsarana momba ny lalàmpanorenana ny lalàna mifehy ny zon’ny mpamorona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2019 4:21 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Janoary taona 2013 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny Alarobia alina 23 Janoary 2013, nanambara ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana Kolombiana fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny andininy faha-13 sy faha-14 ao amin'ny Lalàna 1520, izay fantatra kokoa amin'ny hoe “Lalàna Lleras 2.0″, milaza ny fitsarana fa “mandika ny zo fototry ny fanehoan-kevitra sy ny fifandraisana” ny lalàna. Nampiditra lahatsoratra sy sazy vaovao ho an'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona antserasera araka ny fifanarahana momba ny fahalalahana ara-barotra Free Trade Agreement nosoniavin'i Kolombia sy Etazonia ilay lalàna.
Contra-copyright avy amin'i Marco Gomes (CC BY 2.0)
Nandinika ny Andininy faha-13 ny Fitsarana, izay mandràra ny fampitàna ireo fantsom-pahitalavitra tsy nahazo alalana avy amin'ny tompon'ny zo, ary ny andininy faha-14, izay mandràra ny fanapahana ny Digital Rights Management (DRM) — teknolojia ampiasaina hanakanana ny fidirana amin'ny votoaty nomerika voaaron'ny zon'ny mpamorona — sy ny fanaovana taha-dika votoaty, na dia mety ho nalaina ara-dalàna aza. Nahita ny fitsarana fa fanitsakitsahana ny zo fototry ny fanabeazana, fahazoam-baovao sy ny fitoviana ireo lahatsoratra ireo.
Nanambara ihany koa ny Fitsarana fa tsy ara-dalàna ny fepetra rehetra nandaniana ny lalàna, nilaza fa tokony noraisina ho toy ny lalàna ara-tsata izy fa tsy lalàna mahazatra, ka mahatonga ny lalàna rehetra ho tsy manan-kery.
Vokatry ny fitoriana ny lalàna napetraky ny Senatera, Jorge Robledo tao amin'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana efa ho herintaona lasa izay [es] izao zava-misy izao. Nilaza izy fa mametra ny fampiasana ny aterineto mba handefa vaovao sy mandràra ny fampitàna ny fantsom-pahitalavitra, mametra tsy misy fanamarinana, ny zon'ny olom-pirenena hahazo sy hizara vaovao ny lalàna.
Nanampy tamin'ny zava-misy ankehitriny ihany koa ny fiarovana nataon'ny mpisera aterineto sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona. Hatramin'ny nandanian'ny kongresy ao Kolombia ny lalàna tamin'ny volana May 2012, naneho fahatezerana niely patrana momba ny lalàna ny hetsika “firotsahan'ny olom-pirenena” sy ny hetsi-panoherana.
Omaly anefa, tamin'ny fanambaràn'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana momba ny fitsipahana ny Lalàna Lleras 2.0, feno fankalazana ny tontolon'ny bilaogy Kolombiana. Faly ilay bilaogera @pazpena, avy amin'ny ONG Derechos Digitales (Zo nomerika). Hoy izy nanoratra [es]:
vokatra mahafaly ho an'ny fiarahamonim-pirenena [izay] nanentana [ny tenany] sy ho an'ireo solontena (solombavambahoaka) izay afaka nihaino ny fitakian'izy ireo.
Ankehitriny, mila manangana volavolan-dalàna vaovao momba ny fizakamanana ara-tsaina ny Mpanatanteraka mba hanatanteraka ny fepetra takian'ny Fifanarahana momba ny fahalalahana ara-barotra nifanaovana teo amin'i Kolombia sy Etazonia, izay tsy maintsy ho ankatoavin'ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana indray vao ho lasa lalàna.
Mbola tsy tapitra ny ady.
Kanadà 3 herinandro izay